Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Ihe dị ọhụrụ na Bahamas na Septemba
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Gbaga na mmiri turquoise nke Bahamas iji chọpụta oke agwaetiti dịpụrụ adịpụ na ihe ijuanya dị ebube dị n'okpuru. Site na njem nlegharị anya ọhụrụ, ihe eji arụgharị arụgharị na azụmahịa ọkụ, ndị njem na-achọ ide akwụkwọ ezumike ha na-abịa bụ maka ahụmịhe agaghị echefu echefu.
Ekwuputala ndepụta ihe omume na -atọ ụtọ na Bahamas, ọ dịkwa ịtụnanya.
Cheedị ịnọ ebe ahụ mgbe Tiger Woods laghachiri Albany maka ịma aka World Hero 2021.
Ma ọ bụ nabata ndị ọkụ azụ na steeti Superyacht Friendly Marine na-abanye na Walker's Cay. Mana chere, enwere ihe…
UNEXSO na -ekwupụta ahụmịhe ụgbọ mmiri ọhụrụ nke iko dị na Shark Junction -Ndị njem na-eme njem nlegharị anya na-achọsi ike nwere ike ịnụ ụtọ njem ụgbọ mmiri kacha ọhụrụ na Port Lucaya, Ụgbọ mmiri dị n'okpuru iko na Shark Junction Tour, na nkwụsị atọ na -ekpo ọkụ gụnyere ụwa a ma ama "Shark Junction," ebe obibi nke ọtụtụ Caribbean Reef Sharks, nọọsụ nọọsụ na nnukwu stingrays.
Tiger Woods laghachiri Albany maka ịma aka World Hero 2021 - Tiger Woods, onye ama ama ama ama ama ama na onye nwe golfer na ebe ezumike okomoko, na-akwado ịnabata ya 2021 Ihe ịma aka ụwa dike na Albany, Bahamas malite na Mọnde, Nọvemba 29 - Disemba 5, 2021, iji kwado agụmakwụkwọ ndị ntorobịa n'ofe ụwa.
Ọkacha nka Superyacht enyi na enyi Marina mepere na Walker's Cay, Northern Abacos - Ndị nwe Carl na Gigi Allen na -anabata ndị ọkụ azụ azụ n'isi obodo Bahamas na -emepe ụgbọ mmiri Walker Cay. Marina a gbasawanyere ọhụrụ nwere ike ịnabata superyachts na atụmatụ ịgbakwunye ihe ndị ọzọ gụnyere ọdọ mmiri, spa na bungalows.
Tropic Ocean Airways na -ebido ọrụ ụgbọ elu site na Great Harbor Cay - Malite na Septemba 2, Ụgbọ elu Tropic Ocean na -agbakwunye nhọrọ ụgbọ elu ahaziri ahazi na Great Harbor Cay na agwaetiti Berry. Ndị Floridians nwere ike ugbu a depụta ọrụ enweghị nchekasị site na Fort Lauderdale ruo Nassau, Bimini na The Berry Islands.
Akpọrọ Bahamas maka '' Ebe njedebe kacha mma nke Caribbean nke 2021 '' - Agụọla agwaetiti Bahamas maka Onyinye cha cha nke ụwa. Ndị njem nwere ike ịtụ vootu ha n'Ịntanet ugbu a ruo Ọktoba 15, 2021.
Maka ndepụta zuru ezu nke azụmahịa na nchịkọta maka Bahamas, gaa na www.bahamas.com/deals-kpọpu .
Were ihe ọrinkụ andụ ma nọrọ nwa oge na Margaritaville Beach Resort - Mgbe ịnọ ụbọchị 14 ma ọ bụ karịa Ebe ezumike Margaritaville Beach, ndị ọbịa na -enweta ọnụahịa pụrụ iche ruo 40% kwụsịrị ọnụego oge niile. Window njem dị ugbu a ruo Disemba 31, 2021.
$ 150 ụgwọ kredit maka ndị ezumike Island-Ndị ọkwọ ụgbọ elu nkeonwe na-anata kredit $ 150 maka ịnọ n'ụlọ nkwari akụ abalị abụọ eburu ụzọ nọrọ na nnọkọ ọ bụla sonyere. Agwaetiti Bahama Out Ngwongwo onye otu Board nkwalite tupu Ọktoba 31, 2021.
N'ihe karịrị agwaetiti 700 na cays na agwaetiti 16 pụrụ iche, Bahamas dị naanị kilomita 50 site n'ụsọ oké osimiri Florida, na -enye ụzọ mgbapụ dị mfe nke na -ebuga ndị njem pụọ kwa ụbọchị. Agwaetiti nke Bahamas nwere ịkụ azụ, ịgba mmiri, ịnya ụgbọ mmiri, nnụnụ na ihe omume sitere n'okike, ọtụtụ puku kilomita nke mmiri kachasị egwu n'ụwa na oke osimiri na-eche ezinụlọ, di na nwunye na ndị njem. Nyochaa agwaetiti niile ga -enye na www.bahamas.com ma ọ bụ na Facebook, YouTube or Instagram ịhụ ihe mere Ọ ka Mma na The Bahamas.